Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iiwayini kunye neMimoya » Vuyelwa qabane: I-Australia lelona lizwe linxilayo litsha kwihlabathi
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iiwayini kunye neMimoya
IGlobal Drug Survey 2021 ichaze ukunxila njengeemeko apho amandla omzimba nengqondo aye achaphazeleka kangangokuba ulungelelwaniso, ugxininiso, kunye nentetho zachaphazeleka.
Bangaphezu kwama-32,000 abantu abavela kumazwe angama-22 ahlukeneyo kwihlabathi liphela baveze amanqanaba okusetyenziswa kweziyobisi kunye notywala kuPhando lweZiyobisi lweHlabathi ngo-2021.
Ngokutsho kohlolisiso lonyaka lwamazwe ngamazwe lokusetyenziswa kweziyobisi, abaphenduli baseOstreliya basela utywala ukusa kwinqanaba lokungathobeki ngaphezu kwezihlandlo ezibini ngenyanga (malunga namaxesha angama-27 ngonyaka) ngoxa umlinganiselo wehlabathi wawumalunga nezihlandlo ezili-14, okanye nangaphezulu kancinane kanye ngenyanga.
The UPhando lweZiyobisi lweHlabathi ngo-2021 kuchazwa ukunxila njengeemeko apho amandla omzimba nengqondo aye aphazamiseka kangangokuba ulungelelwano, ugxininiso kunye nentetho zichaphazeleke.
Ngokusekwe kwiziphumo zale ngxelo, abantu base-Australia babizwa ngokuba ngabona basela kakhulu ehlabathini, ngelixa iDenmark neFinland bezibambene kwindawo yesibini, nabaphenduli kwilizwe ngalinye bathe banxila phantse kabini ngenyanga kunyaka ophelileyo.
Phantse ikota yabaphenduli base-Australia baziva bezisola malunga nemikhwa yabo yokusela, malunga nesithathu kwikota yabathathi-nxaxheba abavela kwi-Down Under babika ukuba bangonwabanga ukuba "basele ngokukhawuleza kakhulu."
Noko ke, abantu abasela utywala baseIreland baziva benetyala lokusela ngokugqithiseleyo, yaye ngaphezu kwekota “benqwenela [ukuba] ukuba bebesele kancinane okanye bebengaselanga kwaphela.”
Abasela base-Australia nabo babophe abaphenduli baseFinland phezulu kwoluhlu xa beza kufuna unyango oluphuthumayo kwiimeko "ezinzulu" ezinxulumene notywala. Amaxabiso okufuna unyango kuwo omabini la mazwe ayephantse aphinda kathathu umyinge wehlabathi, ebeka uxinzelelo olongezelelekileyo kwiinkqubo zokhathalelo lwezempilo lukawonke-wonke lwe-COVID.
Abaphandi bophando bathi abantu kwi Ostreliya "Ndakhwela iibhiya" ngexesha lobhubhani we-COVID-19 kuba uninzi lwemimandla luthintele ukuvalwa okwandisiweyo okubonwe kwamanye amazwe kulo nyaka uphelileyo.
Ngaphandle kweVictoria, uninzi lwamazwe kunye nemimandla yadlula nje kukuvalwa okufutshane kunye nokubukhali, okwavumela iindawo zokubuka iindwendwe ukuba zihlale zivulekile kwaye eminye iminyhadala iyenzeka.